Infographic: ny fomba fiasa finday
Ny style an'ny finday
Zoma, Aogositra 12, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Adam Small
Mpandrindra fifandraisana ara-tsosialy votoatin'ny (vao azon'ny RIM) dia nametraka an'ity sary ity tamin'ny Mobile Workstyle. Tsy toy ny Dell Infographic amin'ny mpiasa miasa finday ity infografika ity dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny fahazarana sy ny safidin'ny mpiasa finday fa tsy ny antony tokony handinihan'ny orinasa iray ny asany. Toy ny:
65% amin'ny mpiasa finday mampiasa takelaka
32% ny mpiasa manerantany izao no miankina fitaovana finday mihoatra ny iray mandritra ny andro fiasana mahazatra.
Mpampiasa miditra ny mailaka finday dia tafakatra 36%
Hijery misimisy ..
Manova ny toeram-piasana ny haitao finday. Ahoana no nanovany ny anao?
Aza kivy amin'ny haino aman-jery sosialy
Hoy ny fanadihadiana: Ny fotoana laniana amin'ny tambajotra sosialy no lany fotoana